Dhallinyarada Maanta Oo Ka SHIIR Badan Dadka Waa Weyn, Sababta Ka Dambeysa Iyo Sida Loo Xallin Karo SHIIRKA Badan (Daraasad) - iftineducation.com
iftineducation.com – Dunidaan casriga ah wax walba baaritaan ayaa lagu sameeyaa si natiijada ka dambeysa bannaanka loo soo dhigo. Baaritaan cusub oo ay sameysay jaamacad fadhigeedu yahay dalka Denmark ayaana daaha looga qaaday in dhallinyarada haatan ee adduunkaan ku nool ay ka SHIIR badan yihiin jiilkii ka horreeyey.
Tani waa xaqiiq, waalid kasta iyo shaqsi kasta oo dhallinyaro ah oo ku nool adduunkaan ayaana yaqiinsan doona.
Dhallinyarada maanta ee adduunkaan casriga ah ayaana qaada tallaabo kasta oo ay ku yareyn karaan SHIIRKOODA waana wax ay isku ogyihiin, inta badan waxay adeegsadaan waxyaabaha la isku carfiyo oo ay saabuuntu ugu horreyso, sida ay daraasaddaan cusub daaha ka qaaday.
Si kastaba ha ahaatee, inta badan dhallinyarada maanta waxaa fashila sariirtooda oo si aad ah u shiirta, waxaana la aaminsan yahay inay arrintaas u sabab tahay cunnooyinka ay cunaan iyo lebiska ay xirtaan.
Khubaro ka socota jaamacadda Aarhus University ee dalka Denmark ayaa sameeyey baaritaankaan, waxaana caadi ah inay shiir xad dhaaf ah oo aan loo dulqaadan karin leeyihiin dadka ka hooseeya dhallinta 50ka sanno.
Waxaa la aaminsan yahay inay cunnooyinka dabiiciga ah ka caawin karaan dhallinyarada inuu hoos u dhaco shiirkoodu tusaale wanaagsan waxaa kuugu filan liinta. Baaritaankaan waxaa daaha looga qaaday in boqolkiiba 97 dhallinyarada maanta ku nool adduunka ay yihiin kuwo aan shiirkooda loo dhowaan karin.
Dadka ka sarreeya 50ka sanno ayaana boqolkiiba 84 ka heysta qiimeyntaan.